Imanor emangalisayo - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguVincenzo
IVilletta entle, eseBadolato Marina, engekude nolwandle (imizuzu eli-10) kunye ne-Antico Borgo di Badolato (imizuzu engama-20), i-villa iqulathe ngokwayo, imbono entle egubungela iimbono ezintathu eziphefumlayo (uLwandle, iBorgo kunye nemithi yethu yomnquma. ).
Ndichaza ukuba isibhengezo sijolise ikakhulu kumaqela okanye amaqela afuna ukuhlala ubusuku obuncinane obuhlanu. Ngalo naluphi na ulwazi okanye naziphi na izicelo zakho, sihlala sifumaneka, ngoko ke nceda ungabeki ugcino ngoko nangoko.
Kulabo abathanda ukuphumla, ukuzola kunye nokuzola, le yindawo efanelekileyo yokuhlala.I-villa ibekwe kwindawo yasemaphandleni, ilungele kuphela abo bathanda ngokwenene indalo, imbono yindawo eqinile yendlu, ukuqala ukusuka kwesokudla. ubheka kuLwandle lweIonia yeyokukhulisa, senyuka yaza ifikelela intaba bethu obumangalisayo of izinquma, leyo minyaka kuvumela ukuba ufumane ioli zombini ngokwemiqathango ivumba kunye ukungcamla, itshekhi yokugqibela kufayo ntsho kuyo, xa ngenqaku elinye Forte , ekuphela kwendawo eqinileyo kwindawo yethu encinci, ilali edumileyo yamaxesha aphakathi.
Sisesandleni sakho ngokupheleleyo 24/24